Inona no atao hoe fahefana? | Martech Zone
Inona no atao hoe fahefana?
Alatsinainy Desambra 29, 2008 Asabotsy, Aprily 30, 2016 Douglas Karr
Raha manao fikarohana ianao ny lehibe tranonkala manambara Twitter's Adihevitra momba ny fahefana, ho hitanao ny ataoko momba ny ankamaroan'ny hevitra. Izy io dia mitondra ahy voa ho an'ny rehetra mitandrina miresaka momba izany - ary nisy olona nandeha nanangana aza Twitority ary Twithority.
Nisy anarana tsara kokoa ho Mikaroha bitsika amin'ny filaharana midina avy isan'ny mpanaraka.
Fantatro fa anarana lava be io, saingy io no izy. Io dia tsy Authority.
Famaritana ny fahefana
Olona na fikambanana manana fahefana na fifehezana amin'ny sehatra manokana, matetika politika na fitantanana.
Mba hahazoan'ny olona iray Authority amin'ny Internet na amin'ny Internet, mila zavatra roa izy io:
Tantaram-pahalalana azo tsapain-tanana sy voaporofo amin'ny sehatry ny fahaizana manokana.
Fanekena an'io fahaiza-manao io avy amin'ny olon-kafa manana fahefana.
Ireo milina manasokajy ho an'ny Twitter dia tsy misy roa. Rehefa nisioka momba izany aho Valkyrie roa andro lasa izay, dia ho nipoitra tamin'ny valiny ireo mpanaraka ahy 3,200. An'i Chris Pirillo Tweet ao amin'ny Valkyrie # 1 amin'ny valiny anio - noho ny mpanaraka azy 24,000:
Tiako i Chris Pirillo, saingy tsy manana fahefana kely izy (azafady Chris!) Amin'ny famerenana Valkyrie.
Na izy ireo aza manana mpanaraka 1,872 fotsiny, dia mety ho marimarina kokoa ny milaza izany NY Times Film Twitter, avy amin'ny Pejy Horonan-tsary NY Times, manana fahefana mihoatra lavitra noho izaho, Chris na olon-kafa amin'ny valiny. Ary ny kaonty Twitter NY Times dia misy ampahany amin'ny mpanaraka azy.
Mino aho fa misy toerana malalaka amin'ny haino aman-jery sosialy. Mino aho Algorithme pagerank an'i Google mety ho fanombohana tsara. Fampiharana Twitter iray izay manara-maso ny retweet, ny fihenan'ny bitsika, ny fahita matetika amin'ireo bitsika ary ny isan'ny mpanaraka azy (miorina amin'ny ny fahefana sy fifandraisana) amin'ny sehatra iray manam-pahaizana manokana dia mahafinaritra! Tiako ny afaka mikaroka ireo mpiblaogy manao bilaogy tsara indrindra any!
Ny fahefana dia tsy ny isan'ny olona manaraka anao fotsiny. Ny fahefana dia olona firy manaja anao amin'ny sehatry ny fahaizana manokana.
Tags: fahefanachris pirillogoogle pagerankalgorithm google pageranksarimihetsikanew york timessarimihetsika new york fotoanany fotoanaPageRankpagerank algorithmtwithoritytwitorityvalkyrie
Ny teny miverina enina
Dec 30, 2008 amin'ny 10: 59 AM
Doug, misaotra noho ny fanampianao fahasalamana amin'ity adihevitra efa antitra sy tonta ity.
Fa maninona isika no manana "fahefana" kely kokoa hampiditra ny saina amin'ny resaka.
Na izany aza, raha misy fisorohana volafotsy, dia angamba, indray mandeha ary ho an'ny rehetra, azontsika atao ny mametraka ity adihevitra ity, na dia miahiahy aza ilay pessimist ao amiko fa indrisy.
Lahatsoratra tsara. Misioka izany ho an'ireo mpanaraka ahy 2800! Hasehontsika ireo mpihaino A (tsy mino aho fa nilaza an'izany aho) izay manana fahefana! 🙂
Dec 30, 2008 amin'ny 11: 19 AM
Misaotra anao nanatevin-daharana ny feon-kira nanasongadina ny hevitra tena moana.
Mahita aho fa afaka manivana fikarohana amin'ny isan'ny mpanaraka, saingy tsy mitombina ny fiantsoana azy hoe fahefana.
Ireo olona miaro ity rafitra ity dia manana isa mpanaraka astronomia (Loic, Scoble, Arrington, sns.). Maninona raha antsoina hoe: "Tena asehoy ahy ireo bitsika avy amin'ireo namako tena manan-danja sy mendrika ny saiko."